जोशीको फाइल खोज्दै अख्तियार, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीसँग सम्बन्धित मुद्दाको मिसिल खोज्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । अख्तियारले केही उच्च अधिकारीको प्रत्यक्ष निगरानीमा फाइल खोजी कार्य अगाडि बढाएको हो । फाइलबारे पूर्व कर्मचारीसँग समेत अख्तियारले सोधपुछ गर्ने तयारी गरेको छ ।
जेठ २३ गते सर्वोच्चले १५ दिनभित्र मिसिल पठाउन आदेश गरेको थियो । पाँच वर्षसम्म पनि मिसिल प्राप्त नभएको भन्दै अदालतले अख्तियार सचिवलाई अदालतको अपहेलनामा कारबाही किन नगर्ने भन्दै जवाफ समेत माग गरेको थियो । जवाफ पेससँगै फाइल पनि पेस गर्न आदेश दिएको थियो ।
अदालतको आदेश प्राप्त भएपछि अख्तियारले फाइल खोजीलाई तीब्र पारेको हो । अख्तियारका सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीले आन्तरिक रूपमा फाइल खोजबिनको कार्यलाई प्राथमिकतासाथ अगाडि बढाइएको जानकारी दिए।
भ्रष्टाचार अभियोगमा विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेपछि जोशी र नेपाल सरकार दुबै पक्षले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए । पुनरावेदन परेपछि सर्वोच्चले मुद्दा चलाउने निर्णयको रजिस्टर र सक्कल मिसिल माग गरेको थियो ।
अदालतले २०७१ भदौ २९ गते आदेश गरेको थियो । आदेशको लामो समयसम्म जवाफ नपठाएको अख्तियारले २०७१ कात्तिक २ गते निर्णय सम्बन्धी कागजात अभिलेखमा नभेटिएको जवाफ पठाएको थियो । त्यस समयमा अख्तियारमा लोकमानसिंह कार्की प्रमुख आयुक्त थिए।
सर्वोच्चले माग अनुसार कागजात नपाएपछि पुनः २०७३ भदौ २० गते मिसिल सात दिनभित्र उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको थियो । सोको जवाफ लेख्दै अख्तियारले असोज २ गते मिसिल खोजतलास भइरहेको पत्राचार गरेको थियो। सर्वोच्चको पछिल्लो आदेश अनुसार अख्तियारले फाइल खोज्ने प्रक्रियालाई तिव्रता दिएको हो। गाेरखापत्र दैनिक